मेरो अंजन र छेपाक संग गफ भइ राखेको थियो। त्यो भन्दा अगाडि फेब्रुअरी तिर डिल्ली सँग पनि गफ भएको हो। सगुन न्यु यर्क आए पछि केही कुरा छर्लङ्ग भए।
राउंड १ fundraising को गोल हो राउंड २ fundraising गर्ने ------ because if you can not do that, you are dead. मेरो सगुन सँग deal भइ सकेको छ। सगुनले rapidly growing user base चाहिं देखाउनु पर्ने, र त्यसको आधारमा मैले सगुन का लागि राउंड २ fundraising गर्न lead role खेल्ने। राउंड २ भनेको मिलियन डॉलर भन्दा बढ़ी हुन्छ।
मेरो आफ्नै tech startup को 15K fundraising भइ सकेको, 10K को pledge प्राप्त भइ सकेको, 25K हाल्ने एकै जना पाउन लागेको अवस्था छ। 50 K को गोल हो। त्यो पुरा भए पछि मेरो राउंड १ बन्द हुन्छ। अनि त्यस पछिका राउंड हरुमा आउने भनेको प्रोफेशनल इन्वेस्टर हरु मात्र हो।
सगुनले 350K fundraising गरेको छ, 150K थप fundraising गर्ने प्रयासमा छ।
मैले विनोद, डिल्ली, अंजन, छेपाक, कृष्ण सँग गफ गर्दा राउंड २ सम्म पुग्नलाई राउंड १ मा ३० देखि ५० K प्रयाप्त हुने जस्तो रोडमैप देखाएको थिएँ। सगुनको रोडमैप भन्दा १० गुणा सस्तो देखियो त मैले महिनौ अगाडि देखाएको रोडमैप। तर I have met with an utter refusal to move. विनोदले त 20K अझ खर्च गरिसकेको। तर गल्ती त्यहाँ के गर्यो, प्रोडक्ट बनाउँदा आफ्नो कुरा मात्र गर्यो, मेरो कुरा सुन्दै सुनेन। अब मैले भन्दै छु, अब 1K अझ खर्च गर्ने, यस पटक १००% मेरो कुरा सुन्ने, version २ बनाउने। उसको app ३०० डाउनलोड मा गएर अड्केको छ। चाहिएको ५०,००० डाउनलोड।
डिल्ली, अंजन, छेपाक, कृष्णले आईडिया चाहिं राम्रो राम्रो ल्याए तर if you refuse to move, you are an academic, not an entrepreneur.
NYPNY का संस्थापक नीतिन शर्मा ले पनि गजब आईडिया निकालेका हुन ------ इच्छुक सदस्यले 1K प्रति व्यक्ति झिक्ने भनेर --- न्यु यर्कमा ५० नेपाली मिलियनेयर पैदा गर्ने जुन कुरा छ, त्यो त म एक्लैले गर्दिन्छु भनेको। ५० जनाले 1K प्रति व्यक्ति एउटा LLC मा हाल्ने, अनि त्यो LLC ले मेरो कम्पनीको राउंड १ मा हाल्ने, अनि १० वर्ष पर्खिने। अनि फ़ुत्त फ़ुत्त ५० नेपाली मिलियनेयर पैदा हुनेछन्।
म चाहीं facts present गर्न सक्ने हो, but I guess I am notaचिप्लो salesman ------ People are refusing to move भनौं भने सगुन ले क्या मजा संग मसँग डील गर्यो।
Ad-tech startup Staq is hiring after $2.5 million fundraising round
Createalogo foranew tech startup
Labels: 99designs Advertising campaign anjan shrestha binod shah dilli bhatt krishna pokhrel sagoon Startup company tsepak dorjee Venture capital